सिंहदरबारभित्रै अस्वस्थ खानेकुरा ! - Sarbochcha Media
सिंहदरबारभित्रै अस्वस्थ खानेकुरा !
February 23, 21 2:17 am
काठमाडौँ, ११ फाल्गुन । प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रकै क्यान्टिनमा बनाइएको खाना अस्वस्थकर भेटिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागले गरेको छड्के अनुगमनमा सिंहदरबारभित्रको क्यान्टिनले बनाएको खाना अस्वस्थकर भएको पाइएको छ।
अनुगमनको क्रममा सिंहदरबारको केन्द्रीय चमेनागृह कञ्चन चमेनागृहको भान्साघर फोहोर देखिएको विभागले जनाएको छ। अनुगमनमा गएका विभागका कर्मचारीलाई केन्द्रबलश्रचमेनागृहका कर्मचारीले असहयोग गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले मागेका कागजात केन्द्रीय चमेनागृहका कर्मचारीले देखाएका थिएनन्।
वाणिज्य विभागका कर्मचारीले चमेनागृहका मालिकलाई १० हजार रूपैयाँ जरिमाना गराएका छन्। साथै भान्साघरमा सरसफाइ गर्न विभागका कर्मचारीले सो चमेनागृहका मालिकलाई सचेत गराएको विभागले जनाएको छ। यो खबर नागरिक दैनिकमा छ ।